Muuri News Network » SAWIRO: Magaalada Hobyo iyo u diyaar garowga Soo dhaweynta MD Farmaajo…
SAWIRO: Magaalada Hobyo iyo u diyaar garowga Soo dhaweynta MD Farmaajo…
Safarka Madweynaha Soomaaliya ee Gobollada Dalka ayaa la filayaa in maanta la soo gaba gabeeyo iyada oo Madaxweynaha uu maanta tagayo Magaalada Hobyo oo ka kala tirsan Gobolka Mudug.
Taliyaha Daraawiishta Galmudug ee Gobolka Mudug Xasan Faarax Kaarshe ayaa Saxaafada usheegay in amniga suganyahay ayna udiyaar garoobeen Soo dhaweynta Madaxweynaha Dalka Maxamed C/llaahi Maxamed Farmaajo
Dhinaca Kale Maareeyaha garoonka Diyaaradaha Hobyo ayaa isna dhankiis aka waramaya Wufuuda ilaa hada ka soo dagatay Garoonka ee horu dhaca u ah Wafdiga Madaxweyne Maxamed C/llaahi Maxamed Farmaajo.
Madaxweynaha waxaa la filayaa Sidoo Kale in uu Cadaado kula kulmo Odayaasha Magaalada oo saluug ka keenay in Maamulka Galmuudg inuu u guuro Caasimaddiisa Dhuusamareeb.
Booqashada uu Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya ku tagey Magaalada Caabudwaaq ee Gobolka Galgaduud, ayaa waxay is bedel bilow ahi ka dhalisay colaad in muddo ahba u dhaxeysay beelo wada dhashay oo magaaladaasi wada degga.
Caabudwaaq waxay ka mid tahay magaalooyinka ay ku dambeeyan dilalka aanooyinka xagga beelaha la xiriira, taa oo baqdin ku dhalisay dadka deegaanka, kuna adkaatay inay si caadi ahi isu dhex maraan.
Madaxweynaha Somaliya oo toddobaadkii hore Magaalada Gaalkacyo ka bilaabay dadaalo nabadeed, oo la’isugu soo dhaweynayo beelaha walaalaha ah, ayaa baaqiisa nabadda xambaarsan gaarsiiyay bulshada reer Caabudwaaq.
Madaxweynaha, ayaa Axadii bilaabay inuu Magaalada Caabudwaaq kula kulmo Odayaasha Dhaqanka, Culima’udiinka, Waxgaradka iyo qaybaha kale ee bulshada, isagoo ugu yeeraayay inay nabadda u wada istaaggaan.
Dadka reer Caabudwaaq waxay hadda u muuqaan kuwo soo dhaweeyay baaqa uu soo gaarsiiyay Madaxweyne Farmaajo, waxayna bilaabeen inay is dhex socdaan.